नेपाल आज | कांग्रेस फुट्ने अवस्थामा जाँदैन ( भिडियोसहित)
कांग्रेस फुट्ने अवस्थामा जाँदैन ( भिडियोसहित)
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे भन्छन्, ‘ नेपाली कांग्रेसको विधानमा बहुमतबाट निर्णय गर्ने प्रावधान भएपनि अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा सहमतिबाटै निर्णय हुँदै आएको छ । हिजो वीपी र गणेशमान हुँदा होस वा गिरिजाप्रसाद र कृष्णप्रसाद भट्टराई हुँदा होस या गिरिजाप्रसाद र शेरवहादुर हुँदा होस वा सुशील कोइराला र शेरबहादुर हुँदा होस सबै विवाद सहमतिबाट हल गरिएका छन् । सहमतिबाट पार्टी विवाद हल गर्ने कांग्रेसको परम्परा हो । यो परम्परा आज भत्कियो । ’
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको मिति तोक्ने लगायत बिभिन्न निर्णय बहुमतबाट गरेपछि रुष्ट भएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भेलामा सहभागी नेपाल आजको स्टुडियोमा पुगेका घिमिरे आफै पनि सन्तुष्ट छैनन् । महाधिवेशन लगायत पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा वरिष्ठ नेता पौडेल लगायत पार्टीका महत्वपूर्ण नेताहरुको मानमर्दन गरिएको उनको गुनासो छ ।
घिमिरे भन्छन्, ‘ बैठक राख्दा वरिष्ठ नेता पौडेललाई समेत खबर गरिएन् । यो उहाँमाथिको ‘ह्यूमलेसन’ हो । महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने कुरा पार्टीका वहालवाला महामन्त्री डा. सशांक कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला, प्रभावशाली नेता डा. रामशरण महत, शेखर कोइराला लगायतको अनुपस्थितिमा कसरी सम्भव छ ? यो हेपाह शैलीको विरोध हुनु स्वभाविक हो । ’
नेता घिमिरेका अनुसार जबसम्म केन्द्रीय समितिको निर्णय खारेज हुँदैन तबसम्म देउवा पक्षसंग कुनै संवाद र वार्ता हुनेवाला छैन । अविलम्व निर्णय नसच्याए केन्द्रदेखि स्थानीय तहका नेता कार्यकर्तासँग छलफललाई अघि बढाइने छ । अधिकांश नेता कार्यकर्ताले जे सुझाव दिन्छन्, सोही आधारमा अघि बढ्ने हो ।
पार्टीमा विवाद बढेपनि पार्टी फुट्ने अवस्था भने आउने छैन । सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेल दुवै जना समकालिन र निकै संघर्ष गर्दै यहाँसम्म आइपुगेकाले पार्टीलाई फुटको स्थितिमा लैजानु होला जस्तो लाग्दैन । कुनै न कुनै विन्दुमा सहमति हुन्छ । अझ मुलुकमा निकै गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दा देखा परेको र सरकार पनि गलत ढंगले चलिरहेकाले त्यसविरुद्ध उभिन पनि पार्टी बलियो हुन जरुरी छ । यी विषयमा दुवै नेता जानकार र गम्भीर हुनुुहुन्छ ।
जहाँसम्म सभापति देउवाको हुर्मत लिन खोज्यो भन्ने आरोप पौडेल पक्षलाई लगाइएको छ, त्यो सरासर गलत हो । पौडेल र सभापति देउवा दुवै पार्टीप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ । उहाँहरुमा त्याग र सबैलाई मिलाएर लैजाने सोच र भावना पनि छ । समस्या सभापतिको वरिपरि रहेका केही नेताहरुमा हो । सभापतिको नजिकका केही नेताले सभापति देउवालाई गलत ब्रिफिङ गरेर समस्त पार्टीलाई ध्वस्त पारिरहेका छन् ।
यो कुरा सभापतिले बुझ्न सक्नु पर्छ । पार्टीमा इमान्दार, क्षमतावान र लगनशिल नेता कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिएर अघि हिंड्न सक्नु पर्दछ । अहिले कांग्रेस लगायत सत्तारुढ नेकपा र अन्य दलमा देखिएको विवादमा विदेशीले खेले कि भन्ने पनि कुरा सुनिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको दवाव पार्टी भित्र छताछुल्ल भएको हो कि भन्ने पनि छ । यसमा सत्यता पनि हुनसक्छ । तर कांग्रेस यसमा सचेत छ ।
जहाँसम्म अमेरिकाको सहयोग परियोजना एमसीसी छ यसको पक्षमा कांग्रेस चट्टान झैं उभिन्छ । भोलि संसदमा मतदान भए, यसको पक्षमा मतदान गरिन्छ । एमसीसी नेपालको हीतमा छ, यसलाई नेपालको हीतमा प्रयोग गर्ने क्षमता दलहरुले राख्नु पर्दछ ।
अर्को सीमाका विषयमा अहिलेको सरकार रहस्यात्मक ढंगले मौन बसेको छ । नाकाबन्दीविरुद्ध चर्को आवाज गरेर राष्ट्रवादी कहलिएका केपी शर्मा ओलीको बोली अहिले किन फिक्का भयो ? यो खोक्रो राष्ट्रवाद नभए के हो ?
घिमिरे भन्छन्, ‘ मलाई त यो सचिवस्तरीय टोलीले गरेको छलफलले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको समस्या समाधान हुन्छ जस्तो लाग्दैन । भारतसँग जोडिएको सीमा समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीस्तरमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठकले सुझाव दिएको हो । त्यसको पालना प्रधानमन्त्री किन गर्दैनन् ?’
‘राष्ट्रिय राजनीतिमा जे सुकै परिवर्तन आएपनि कांग्रेस परिपक्व ढंगले अघि बढ्नु पर्दछ । अहिले सरकार छोडेको समाजवादी पार्टी, राजपा लगायतले कांग्रेससँग सहकार्यको चर्चा चलाएका छन् । वास्तावमा मधेश केन्द्रीत दलहरु निकै अवसरवादी देखिन्छन् । सत्ता पाए उनीहरु राजनीतिक आदर्श, सिद्धान्तको कुनै मतलव गर्दैनन् । सत्ताका लागि जोसँग पनि गठवन्धन गर्छन् । संविधान संशोधन गर्न नचाहने पार्टीसँग पटक–पटक गठवन्धन गर्नुको कारण के हो ? हामी सहकार्य त गरौंला तर त्यो भन्दा अघि आफनो धरातल उनीहरुले स्पष्ट गर्नुपर्छ । ’ घिमिरेको तर्क छ ।